ဥရောပစူပါဖလားပွဲကြိုမှာ တူဟယ်လ်နဲ့ အမ်မရီတို့ ဘယ်လိုစကားစစ်ထိုးသွားခဲ့ကြလဲ? – Sports A2Z
La Liga • Other • Premier League • UCL&UEL
ဥရောပစူပါဖလားပွဲကြိုမှာ တူဟယ်လ်နဲ့ အမ်မရီတို့ ဘယ်လိုစကားစစ်ထိုးသွားခဲ့ကြလဲ?
ဒီနေ့ညမှာတော့ ချန်ပီယံလိဂ်ချန်ပီယံ ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ချန်ပီယံ ဗီလာရီးရဲလ်အသင်းတို့ဟာ ဥရောပချန်ပီယံနှစ်သင်း ထိပ်တိုက်ဗိုလ်လုကြမယ့် UEFA ဥရောပစူပါဖလားကို စိန်ခေါ်သွားကြမှာဖြစ်ပြီး ဘယ်သူက ဥရောပဘုရင်အစစ်လဲဆိုတာ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းအရ သက်သေပြသွားကြရတော့မှာပါ။
ဒီပွဲဟာ PSG နည်းပြဟောင်းနှစ်ဦးရဲ့ ပြန်လည်ဆုံစည်းမှုလို့လည်း ဆိုနိုင်သလို ပွဲကြိုမှာ သောမတ်စ် တူဟယ်လ်နဲ့ အူနိုင်း အမ်မရီတို့ဟာ တဦးနဲ့တဦး အပြန်အလှန်လေးစားသမှုနဲ့ ချီးကျူးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့် ဖလားလုပွဲတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဘယ်သူကဖားလဲ၊ ဘယ်သူကငါးလဲ ဖော်ပြဖို့ ခပ်တင်းတင်းပဲ စိန်ခေါ်သွားခဲ့ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဗီလာရီးရဲလ်နည်းပြ အူနိုင်း အမ်မရီက “မှိန်းပြီး လိုက်နေရင်တော့ ခင်ဗျားဘဝကျရှူံးပါပြီ။ ဒါကြောင့် နောက်ထပ်အသစ်ကို ဆက်ဖန်တီးရပါမယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ တခြားနည်းပြတွေလိုမျိုး ရပြီးတဲ့အောင်မြင်မှုတွေမှာပဲ မိန်းမောနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်ရှိနဲ့ အနာဂတ်ကို အမြဲအာရုံစိုက်ထားပါတယ်”
” UEFA ဥရောပစူပါဖလားကို ၂ ကြိမ်ကစားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော်အရေးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ PSG နဲ့တော့ ပြည်တွင်းစူပါဖလားတွေကို ရယူခဲ့ဖူးပေမယ့် ဥရောပစူပါဖလားနဲ့တော့ ဝေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုတကြိမ်မှာ ချယ်လ်ဆီးလိုအသင်းကြီးကို အပြတ်ဖြုတ်ပြီး အနိုင်ရချင်ပါတယ်။”
” သောမတ်စ် တူဟယ်လ်က တကယ့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိပြီး အောင်မြင်မှုကြီးမားတဲ့ နည်းပြတဦးပါ။ ဂျာမနီမှာလည်း ဆုဖလားတွေကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ PSG နဲ့လည်း ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သူပါ။ ကျွန်တော်တိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက စိုက်ပျိုးခဲ့တာကို စူပါဖလားယူပြီး ရာသီသစ်ကို ဖွင့်လှစ်သွားချင်ပါတယ်။ “လို့ ခပ်ရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်သာ ပွဲကြိုမှာ ဆိုသွားခဲ့တာပါ။
ဒါ့အပြင် ချယ်လ်ဆီးနည်းပြ သောမတ်စ် တူဟယ်လ်ကလည်း “စပိန်အသင်းတွေနဲ့တွေ့ရင်တော့ ခင်ဗျားအရမ်းကိုသတိထားရပါလိမ့်မယ်။ သူတို့က သိပ်ကိုသတ္တိပြင်းတယ်။ ကစားပွဲကို တန်းတန်းစွဲကို ကစားကြတာပါ။ ဗီလာရီးရဲလ်အသင်းဆိုရင် ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအသာစီးနဲ့ ကစားတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ နောက်ထပ်ဖလားတလုံးရအောင် လေးလေးနက်နက် တိုက်ပွဲဝင်ရမှာပါ”
” ကျွန်တော်က ဗီလာရီးရဲလ်အသင်းနဲ့ အူနိုင်း အမ်မရီကို သိပ်ပြီးလေးစားပါတယ်။ ယူရိုပါလိဂ်ဖလားဆိုတာ အူနိုင်း အမ်မရီရဲ့ဖလားလို့တောင် ပြောလို့ရနေပါပြီဗျာ။ သူက ဖိုင်နယ် ၅ ကြိမ်တက်ပြီး ဖလား ၄ လုံးအထိ ယူထားတယ်ဆိုတာ လျှော့တွက်ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး” လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့မှုမှာ ပွဲကြိုမှာတော့ အတော်​လေးပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်နေတာကို တွေ့ခဲ့ရကြောင်း တင်ဆက်ပေးပါရစေ။
ဒီေန႔ညမွာေတာ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ခ်န္ပီယံ ခ်ယ္လ္ဆီးအသင္းနဲ႔ ယူ႐ိုပါလိဂ္ခ်န္ပီယံ ဗီလာရီးရဲလ္အသင္းတို႔ဟာ ဥေရာပခ်န္ပီယံႏွစ္သင္း ထိပ္တိုက္ဗိုလ္လုၾကမယ့္ UEFA ဥေရာပစူပါဖလားကို စိန္ေခၚသြားၾကမွာျဖစ္ၿပီး ဘယ္သူက ဥေရာပဘုရင္အစစ္လဲဆိုတာ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းအရ သက္ေသျပသြားၾကရေတာ့မွာပါ။
ဒီပြဲဟာ PSG နည္းျပေဟာင္းႏွစ္ဦးရဲ႕ ျပန္လည္ဆုံစည္းမႈလို႔လည္း ဆိုႏိုင္သလို ပြဲႀကိဳမွာ ေသာမတ္စ္ တူဟယ္လ္နဲ႔ အူႏိုင္း အမ္မရီတို႔ဟာ တဦးနဲ႔တဦး အျပန္အလွန္ေလးစားသမႈနဲ႔ ခ်ီးက်ဴးမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ ဖလားလုပြဲေတြရဲ႕ ထုံးစံအတိုင္း ဘယ္သူကဖားလဲ၊ ဘယ္သူကငါးလဲ ေဖာ္ျပဖို႔ ခပ္တင္းတင္းပဲ စိန္ေခၚသြားခဲ့ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ဗီလာရီးရဲလ္နည္းျပ အူႏိုင္း အမ္မရီက “မွိန္းၿပီး လိုက္ေနရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားဘဝက်ရႉံးပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္အသစ္ကို ဆက္ဖန္တီးရပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ တျခားနည္းျပေတြလိုမ်ိဳး ရၿပီးတဲ့ေအာင္ျမင္မႈေတြမွာပဲ မိန္းေမာေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လက္ရွိနဲ႔ အနာဂတ္ကို အၿမဲအာ႐ုံစိုက္ထားပါတယ္”
” UEFA ဥေရာပစူပါဖလားကို ၂ ႀကိမ္ကစားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္အေရးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ PSG နဲ႔ေတာ့ ျပည္တြင္းစူပါဖလားေတြကို ရယူခဲ့ဖူးေပမယ့္ ဥေရာပစူပါဖလားနဲ႔ေတာ့ ေဝးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုတႀကိမ္မွာ ခ်ယ္လ္ဆီးလိုအသင္းႀကီးကို အျပတ္ျဖဳတ္ၿပီး အႏိုင္ရခ်င္ပါတယ္။”
” ေသာမတ္စ္ တူဟယ္လ္က တကယ့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိၿပီး ေအာင္ျမင္မႈႀကီးမားတဲ့ နည္းျပတဦးပါ။ ဂ်ာမနီမွာလည္း ဆုဖလားေတြကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ PSG နဲ႔လည္း ခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့သူပါ။ ကြၽန္ေတာ္တိုၿပီးခဲ့တဲ့ရာသီက စိုက္ပ်ိဳးခဲ့တာကို စူပါဖလားယူၿပီး ရာသီသစ္ကို ဖြင့္လွစ္သြားခ်င္ပါတယ္။ “လို႔ ခပ္ရွင္းရွင္းျပတ္ျပတ္သာ ပြဲႀကိဳမွာ ဆိုသြားခဲ့တာပါ။
ဒါ့အျပင္ ခ်ယ္လ္ဆီးနည္းျပ ေသာမတ္စ္ တူဟယ္လ္ကလည္း “စပိန္အသင္းေတြနဲ႔ေတြ႕ရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားအရမ္းကိုသတိထားရပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔က သိပ္ကိုသတၱိျပင္းတယ္။ ကစားပြဲကို တန္းတန္းစြဲကို ကစားၾကတာပါ။ ဗီလာရီးရဲလ္အသင္းဆိုရင္ ေဘာလုံးပိုင္ဆိုင္မႈအသာစီးနဲ႔ ကစားတတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ဖလားတလုံးရေအာင္ ေလးေလးနက္နက္ တိုက္ပြဲဝင္ရမွာပါ”
” ကြၽန္ေတာ္က ဗီလာရီးရဲလ္အသင္းနဲ႔ အူႏိုင္း အမ္မရီကို သိပ္ၿပီးေလးစားပါတယ္။ ယူ႐ိုပါလိဂ္ဖလားဆိုတာ အူႏိုင္း အမ္မရီရဲ႕ဖလားလို႔ေတာင္ ေျပာလို႔ရေနပါၿပီဗ်ာ။ သူက ဖိုင္နယ္ ၅ ႀကိမ္တက္ၿပီး ဖလား ၄ လုံးအထိ ယူထားတယ္ဆိုတာ ေလွ်ာ့တြက္ရမယ့္ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး” လို႔ ေျပာဆိုသြားခဲ့မႈမွာ ပြဲႀကိဳမွာေတာ့ အေတာ္​ေလးၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ေနတာကို ေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း တင္ဆက္ေပးပါရေစ။
အာဆင်နယ်ရဲ့ ပြောင်းအရွှေ့ကို မကျေနပ်တဲ့ ပရိသတ်တွေ အာတီတာအမြန်ဆုံးနှုတ်ထွက်ဖို့ ပေါက်ကွဲနေကြ
ယူနိုက်တက်နဲ့ အာဆင်နယ်တို့ မနိုင်ခဲ့တဲ့ ဗီလာရီးရဲလ်ကို အနိုင်ယူပြီး ဆူပါဖလားကိုင်မြောက်မယ့် ခြင်္သေ့ပြာများ